February | 2009 | Layma's World
Posted on February 20, 2009 by layma
ဒီမြေ နဲ့ ဒီခြံကို ကျွန်မတို့ ရဲ့ အိမ်… ကျွန်မတို့ ရဲ့နေရပ်… ကျွန်မတို့ခေါင်းချမယ့်နေရာလို့ကျွန်မတို့အားလုံးက သတ်မှတ်ထားကြတယ်…။ ကျွန်မတို့ ထဲမှာ ဒီခြံမှာမွေးတဲ့ ငယ်မွေးခြံပေါက်တွေရှိပေမယ့် တော်တော်နည်းပါတယ်…။ အများစုကတော့ အိမ်ကြီးရှင်မက တစ်နေရာရာကနေ သယ်ယူလာတဲ့ သူတွေဖြစ်ပါတယ်…။ ကျွန်မကတော့ ဒီခြံမှာ အစွာဆုံး.. အနံ့ အပြင်းဆုံး ညမွှေးပန်း ဖြစ်ပါတယ်…။ ကျွန်မရဲ့ အရိုးအဆစ်တွေက မကြီးလွန်း မငယ်လွန်းတဲ့ အနေတော် အရွယ်အစားမှာ ရှိပြီး အုံနဲ့ ကျင်းနဲ့ရှိနေတဲ့အပြင် ကျွန်မရဲ့ ရနံ့ ထုတ်နိုင်စွမ်းကို ယှဉ်နိုင်တဲ့သူ ဒီခြံထဲမှာ တစ်ပင်မှ မရှိတဲ့အတွက် ကျွန်မကအရောက်နောက်ကျပေမယ့် စွာတေးပန်း နေရာရခဲ့တယ်…။ ဒါတင်ဘယ်ကမလဲ… အိမ်ကြီးရှင်မက ဟိုတလောက ကျွန်မနားခဏခဏလာပြီး ကျွန်မကို တသသကြည့်တယ်လေ…။ ညမွှေးပန်းရဲ့ရနံ့ ကို နေ့ ဘက်မှာ သတိမထားမိတာ တခြားအာရုံတွေကြောင့်လို့ရေးထားတာဖတ်ရလို့ … ဟုတ်မဟုတ် အတည်ပြုချင်လို့ဆိုပြီး ကျွန်မနားကို ခဏခဏလာတယ်…။ မျက်စိကိုမှိတ်… တခြားအာရုံတွေ ဖျောက်.. ကျွန်မနားကပ်ပြီး အားပါးတရ အနံ့ခံရှာတယ်…။ ကျွန်မက သူ့ ကို ကျီစားတဲ့ အနေနဲ့အနံ့ ကိုလျှော့ထားလိုက်တော့ ဇဝေဇ၀ါနဲ့မခူးစဖူး ဇာတ်ခနဲ ကျွန်မရဲ့ အပွင့်တချို့ ကို ခူးပြီး သေချာမွှေးကြည့််ပြန်ပါတယ်…။ အဲဒီလိုနဲ့ကျွန်မနားကို အိမ်ကြီးရှင်မက နေ့ ဘက်လာကပ်လိုက်… ညဘက်လာကပ်လိုက်နဲ့ … နေ့ နဲ့ ည ထုတ်လွှတ်တဲ့အနံ့ ပမာဏ တူမတူ သုတေသန ပြုနေလိုက်တာ… သူ့ အတွက်တော့ မသိဘူး… ကျွန်မအတွက်တော့ တော်တေ်ာအမြတ်ထွက်လိုက်ပါတယ်…။ အိမ်ကြီးရှင်မ အင်မတန်စိတ်ဝင်စားတာ ခံရတဲ့ ပန်းအဖြစ် အခြားအပင်တွေက ကျွန်မကို လေးစားအားကျကြတယ်…။
ကျွန်မရဲ့ အပင်ခြေရင်းမှာတော့ ညီမငယ်ထွေး စံပယ်ရုံလေး က နေရာချထားခံရပါတယ်…။ သူလေးက ရုံလေးနဲ့ ရှိနေပေမယ့်… အားငယ်တတ်သူလေး ဖြစ်ပါတယ်…။ ကြံဖန်တွေးတော အားငယ်တတ်သူလေး ဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ
“မညမွှေးရယ်… ညီမတို့ ကို အိမ်ကြီးရှင်မက ခုလို အိမ်နဲ့အဝေးဆုံး ခြံထောင့်မှာ ပို့ ထားတာ မုန်းလို့ များလားဟင်…”
“အော်… စပယ်မရယ်… အားငယ်တတ်ရန်ကော…။ သူ့ အိပ်ခန်း ပြတင်းပေါက်ကို လှပ်ပြီး ဖွေးဖွေးလှုပ်နေတဲ့ ညည်းကို ပြုံးပြုံးပြတာ ဘယ်သူများလဲ…။ အိမ်ကြီးရှင်မပဲ မဟုတ်လား…။ အိပ်ယာနိုးတဲ့ အချိန်မှာ… ညည်းကိုမြင်ရတာ စိတ်ကြည်နူးတယ်လို့အိမ်ကြီးရှင်မက ပြောခဲ့သားပဲလေ…။”
“ဒါပေမယ့် မညမွှေးရယ်… ကိုကွမ်းပွှားတို့ ကိုလည်း အိပ်ခန်းပြတင်းက အတိုင်းသားမြင်နေရသားပဲ… သူတို့ ကျတော့ အိမ်နဲ့ အနီးလေးရယ်…။”
“စပယ်မရယ်… ညည်းတို့ငါတို့ က ကွမ်းပွှားတို့ နဲ့တူမလား… ။ ငါတို့ က အပွင့်တွေဝေနေအောင်ပွင့် ပြီး တစ်ခြံလုံး သင်းနေအောင် မွှေးကြရတဲ့သူတွေလေ…။ လေတိုက်ခံရမှ ဖြစ်မှာပေါ့…။ လေတိုက်ခံရဖို့ က လေတိုက်တဲ့ အရပ်.. အကာမရှိတဲ့ အရပ်မှာ နေမှပေါ့… ဘာလဲ.. ညည်းက ဒေါ်ကြီင်္းပိတောက်နားမှာ နေချင်လို့ လား..။ အဲဒီအဖွားကြီး လောင်းရိပ်မိပြီး ညည်းအပွင့်မပွင့်နိုင်မှ အိမ်ကြီးရှင်မက ညည်းကို နုတ်ပြီး အဝေးဆုံးပို့ ပစ်မှာ ….။”
“ မိညမွှေး.. ညည်း.. ငါ့ကို အဖွားကြီးလို့ပြောပြန်ပြီလား… ငါက ဒီခြံမှာ အသက်အကြီးဆုံး… အရင်ဆုံးရှိနေခဲ့တဲ့သူ… အပင်အားလုံးထက် စီနီယာကျတယ်… ညည်းလေးလေးစားစား ဆက်ဆံသင့်တယ်…။
“ဟုတ်ကဲ့ပါ.. စီနီယာ မမရယ်… ညမွှေး.. နောက်ဆို အဖွားကြီး လို့မခေါ်တော့ပါဘူး..
ရွဲ့ မနေပါနဲ့မိညမွှေးရယ်…။ အေးလေ.. ငါက ညည်းပြောသလို … အဖွားကြီးပဲ ထားပါတော့… ဒါပေမယ့် အသက်ကြီးပေမယ့် မပျက်စီးသေးဘူးနော.. တန်ခူးလရောက်တိုင်း ပွင့်နိုင်တုန်း.. ပွင့်နေတုန်း…။
ဒါပေမယ့် ကျွန်မတို့ လို ရာသီတိုင်းတော့ မပွင့်နိုင်ဘူးလေ
ဒါတော့ ညည်းဗဟုသုတ ခေါင်းပါးလွန်းရာကျတယ်… ငါတို့ ပိတောက်မျိုးနွယ်ဆိုတာ ရာသီတိုင်းမပွင့်ရဘူး… အချိန်နဲ့အခါနဲ့ပွင့်ရတယ်…။ မျိုးနွယ်ရဲ့ ဓလေ့ထုံးစံကို စောင့်ထိန်းရမှာ မျိုးဆက်ရဲ့ တာဝန်ပဲ …။
မှတ်ချက်။ ။ ဘာကြီးလဲလို့တွေးမနေပါနဲ့ .. အပင်တွေ အကြောင်းပါ။
Filed under: Flower, Pieces |	11 Comments »
Posted on February 14, 2009 by layma
အစ်မ… ချစ်သူများနေ့ဘာအစီအစဉ် ရှိလဲ
ဆံပင်တွေကို ပေါင်းတင်ဆေးနဲ့စိတ်ရှည် လက်ရှည် သုတ်လိမ်း နေတဲ့ မိန်းကလေးက ရင်းရင်းနှီးနှီး စကားစလာချိန်မှာ မင်သက်ပြီး ဘာပြန်ဖြေရမှန်းမသိ …။
ဘာအစီအစဉ်ရှိပါလိမ့် … ဘာအစီစဉ်ရှိပါလိမ့် … ကမန်းကတမ်း ပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့ … အိမ်ရှင်းမယ်… ဈေးဝယ်မယ်… တူလေးကို ထိန်းရမယ်…။ ဒါတွေကို အစီအစဉ်လို့ခေါ်ပါ့မလား… လုပ်နေကျအလုပ်တွေကို အထူးအစီအစဉ်လို့ပြောစရာအကြောင်းမှ မရှိတာပဲလေ…။
ဟင်… အင်း… ဟင်း…ဟင်း… အဲဒါ အစ်မနဲ့မဆိုင်တော့ဘူးလေ… လူငယ်တွေနဲ့ဆိုင်တာ….
တော်တော် ကဘောက်တိကဘောက်ချာနိုင်တဲ့ အဖြေပဲ…။
ခစ်…ခစ်… အစ်မကလည်း … လူငယ် မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောရဲသေးတယ်… အစ်မက ခုမှ ၂၇ လောက်ပဲရှိဦးမယ်…
ညီမကို မုန့် ကျွေးမယ်… အစ်မက ၃၀ ပြည့်တော့မှာ…
၃၀ ဆိုလည်း လူငယ်ပါပဲ အစ်မရယ်…
ဟုတ်သားပဲ… ငါ့ကိုယ်ငါ လူငယ်လို့ခံယူထားရမှာပဲ…ဘာလို့ များ လူငယ်မဟုတ်ဘူးလို့တွေးမိပါလိမ့် …
အပူပေးတဲ့ စက်ကို ခေါင်းပေါ်မှာ နေသားတကျဖြစ်အောင် ချိန်ပေးရင်း မဂ္ဂဇင်း စာအုပ်တစ်အုပ် လက်ထဲလာထည့်တဲ့ မိန်းကလေးကို ပြုံးပြလိုက်ရင်း မဖတ်ဖြစ်တာ ကြာပြီ ဖြစ်တဲ့ မဂ္ဂဇင်းကို အငမ်းမရ လှန်လိုက်တယ်…။
ချစ်သူများနေ့အထူးလျှော့ဈေး… စုံတွဲများအတွက် အထူးအစီအစဉ် …. ချစ်သူများနေ့အထိမ်းအမှတ်… ။
မနက်ဖြန် ၁၄ ရက်နေ့့
မိန်းမကကွန်ပြူတာ ဖန်သားပြင်ပေါ်က မျက်နှာခွာပြီး ကျွန်တော့်ဘက်လှည့်ကာ … စိတ်မရှည်သံဖြင့် …
မိန်းမက ဘာမှဆက်မပြောတော့ဘဲ ကွန်ပြူတာဘက် ပြန်လှည့်သွားပါသည်…။
မိန်းမကို ချောကလက်လေး ဘာလေး ကျွေးချင်စိတ်မရှိဘူးလား…
အသစ်.. အသစ်ပြောတာ.. အသစ်စားချင်တာ…
မိန်းမရယ်… ဒါများ… မနက်ဖြန်ကျတော့ အပြင်ထွက်ရင် ကြိုက်တာ ၀ယ်စားပေါ့… ချောကလက်စားတာများ .. ယောက်ျားကို ဘယ်တုန်းက ခွင့်တောင်းဖူးလို့ တုန်း…
ဟင်… ကို…ဟာလေ… လုံးဝ ရိုမန်တစ်မဖြစ်ဘူး… အရင်တုန်းက ရိုမန်တစ်ဖြစ်တယ်မှတ်လို့ယူခဲ့မိတာ… ခုကျမှ ရေခဲတုန်းကြီးမှန်း သိတော့တယ်…
ဟား… ဟား… ချစ်သူများနေ့ အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ချောကလက် ကျွေးခိုင်းနေတာလား… မိန်းမရယ်… ကလေးကလား အလုပ်တွေ…
ဘာ.. ကလေးကလား.. ဟုတ်လား… ဒါဆို အရင်တုန်းက နှင်းဆီပန်းတွေ ထုပ်ပိုးပြီး လာပေးတာ ဘာလုပ်တာလဲ… ချောကလက်ပေးပြီး … ချစ်သူများနေ့ တွေကို လက်တွဲပြီး ဖြတ်သန်းကြရအောင်လို့ရေးပေးခဲ့တာတွေက ကစားတာပေါ့.. ဆော့တာပေါ့… ကလေးကလားလုပ်တာပေါ့.. ဟုတ်လား.. ရှင့်သူငယ်ချင်းတွေ မြှောက်ပေးလို့အဲလို တွေ ကျွန်မကို လာပေးတာ မဟုတ်လား… တကယ့်တော့ ရှင့်ရင်ထဲမှာ အဲလို သိမ်မွေ့ တဲ့ ပေးဆပ်ခြင်းတွေ မရှိခဲ့ဘူး မဟုတ်လား …
ရစ်ပြီ.. ရစ်ပြီဟ… မဟုတ်ပါဘူးကွာ… အဲဒီတုန်းက လူငယ်တွေမဟုတ်လား… အခု ကို တို့အဲလို လူငယ်ဆန်ဆန် အချစ်တွေနဲ့ …….
အော်.. သိပြီ…သိပြီ… ကျွန်မကိုယ်ကျွန်မ လူငယ်တစ်ယောက်မဟုတ်သလို ခံစားနေရတဲ့ အကြောင်းရင်းကို သိပြီ… ။ တရားခံက ရှင်ကိုး… ရှင့်ကြောင့်… ရှင့်စကားတွေ… အပြုအမူတွေအောက်မှာ မှိုင်းမိပြီး ကျွန်မရဲ့ လူငယ်ဘ၀ပျောက်ဆုံးနေတာ…။ ရှင်တရားခံ….ရှင့်ကြောင့်….။
မိန်းမရယ်… ဒေါသမထွက်ပါနဲ့ … ။ ချစ်သူများနေ့ မှာ ချစ်သူတွေက အမှတ်တရလက်ဆောင်တွေ ပေးကြ… ချောကလက်တွေ ကျွေးကြ… ဟုတ်တယ်နော်…။ တို့ နှစ်ယောက်က ချစ်သူအဆင့်ထက် အများကြီး သာသွားပြီ… အိမ်ထောင်ရှင် ဖြစ်သွားပြီ…။.
အဲတော့ ဘာဖြစ်လဲ… မလိုတော့ဘူးပေ့ါ… ဟုတ်လား..
အိမ်ထောင်ရှင်များနေ့ သာ သတ်မှတ်လိုက်ကြစမ်းပါ… ဟွန်း … ဘယ်အိမ်ထောင်ရှင်မှ လိုက်မမှီအောင် ရိုမန်တစ် ဖြစ်ပြလိုက်စမ်းမယ်….။
အိမ်ထောင်ရှင်များနေ့ ..။ ခစ်… ။ ရှင်ပဲ သတ်မှတ်….။
ကို့ ကို သတ်မှတ်ခိုင်းလို့ ကတော့ တစ်နှစ်မှာ ၃၆၃ ရက်ကို အိမ်ထောင်ရှင်များနေ့ အဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်မယ်…။ ဒါမှ ငါ့မိန်းမကို ရိုမန်တစ်ဖြစ်တဲ့ လက်ဆောင်လေးတွေ နေ့ တိုင်း.. ပေးလို့ ရအောင်…။
၃၆၅ ရက်မှာ ၃၆၃ ရက်က အိမ်ထောင်ရှင်များနေ့ ဆိုတော့ ကျန်တဲ့ ၂ ရက်က ဘာလဲ…။
ကျန်တဲ့ ၂ ရက်လား… ၁ရက်က ချစ်သူများနေ့ …။ ၁ ရက်က….
ပြုံးယောင်သန်း လာတဲ့ သူမ မျက်နှာကို ခပ်ပြုံးပြုံး ကြည့်ရင်း…
၁ ရက်က .. ကျန်တဲ့ တစ်ရက်က … အိမ်ထောင်ရှင်ယောက်ျားများ လူပျိုယောင်ဆောင်သောနေ့ … ဟီး.. ဟီး…။
စကားအဆုံးမှာတော့ သူမ ထုနှက်ကုတ်ဖဲ့လို့ ရအောင် ကျောကို အသင့်လှည့်ပေးလိုက်ပါတော့တယ်….။ ။
မှတ်ချက်။ ။ စိတ်ကူးသက်သက်ပါ…။ ၀တ္ထုရေးကြည့်တာပါ…။ ၀တ္ထုတိုပါ….။
Filed under: Pieces, Seasonal Post |	21 Comments »